Izao vao tena handroso i Madagasikara | NewsMada
Tena fandrosoana hita maso sy azo tsapain-tanana no hiainan’ny Malagasy manomboka eto.
Raha ny voarakitra ao amin’ny IEM izay vinan’asan’ny filoha amin’izao fotoana, zavatra tsy mbola fahitan’ny Malagasy no ho azony ato ho ato.
Anisan’izany ny tanàna voavoatra antsoina hoe Tanamasoandro. Hamirapiratra sy ho modely izany na amin’ny fotodrafitrasa na amin’ny fahadiovana eny hatramin’ny firindran’ny asa rehetra ao anatiny. Ny fangatahan’ny mponina dia mba tsy hisy fandrodanana trano na fakana tanin’olona amin’ny fanorenana izany tanànan’ny fanantenana vaovao izany.
Tsy mbola mahazatra ny Malagasy koa ny mahita izany trano avobe izany, indrindra ho an’ireo any amin’ny faritra. Hahita maso izany ary hiaina any anatin’izany ireo Malagasy ato ho ato satria anisan’ny fanambin’ny filoha hajaina Rajoelina Andry izany. Toky no efa nomeny tamin’ny alalan’ny velirano izay noventesiny matetika fa handroso tanteraka i Madagasikara, ho foana ny fahantrana e!
Ho an’ny mpiompy omby, handry fahalemana ny tany, indrindra ireo any ambanivohitra satria marobe anie ny angidimby hanaraka ireo dahalo fahavalom-pirenena e! Ankoatra izany, asiana “puce” ny omby hahafahana manara-dia azy ireo amin’ny tany rehetra alehany ka hatory tsara amin’izay isika tantsaha manomboka izao.
Anisan’ny andrandrain’ny maro koa ny fahavitan’ny lalana any Ambatondrazaka izay sompitr’i Madagasikara. Rehefa tsara ny lalana , ho tonga tsara amin’ny toerana rehetra ny vary ary ho mora ny vidiny. Tsy hisy intsony ny sakafo ambany foitra.
Tsy azo hadinoina ny fametrahana ny karama farany ambany ho 200.000 Ar. Tsy mbola nisy fandrosoana toy izany kosa aloha e! Iza no tsy ho faly amin’izany. Veloma Rafahantrana ô! Rehefa hihatra izany fampiakarana karama izany, tokony ho voafehy ny fiakaran’ny vidin’entana mba tsy ho zava-poana ny karama nampiakarina.
Efa nahafantarana ny filoha vaovao ny Tsena mora sy ny vary mora ary efa noporofoiny izany tamin’ny tetezamita. Miandry izany indray ny vahoaka izay tsy hisy madinika intsony manomboka eto fa efa hitovy daholo satria miara-mandroso…